Easy, Ọnụ Ụzọ dịtụrụ Ezé Gị | Best Way to whiten Ezé Guide
Ọ bụ n'ebe a mma n'ụzọ na-acha ọcha ọnụ ọchị? Ọ bụghị ihe niile nke kasị mma ma ọ bụ nwere ike obi. Isiokwu a ga-enye ụfọdụ magburu onwe ezé na-elekọta ma na udo.
Nzọụkwụ mbụ na-acha ọcha, chawapụrụ ezé bụ ezigbo, ọkachamara ihicha. Dental cleanings kwesịrị a na-eme, ebe ị ịtọọ oge ọ bụla oge atọrọ ọ bụla ọnwa isii. Otú ọ dị, mgbe nile ọkachamara ihicha dị mfe ileghara anya ma na-emekarị kpuchie ọtụtụ ụdị nke eze na mkpuchi.
NDỤMỌDỤ! Mgbe ị whiten ezé gị, ịkpachara anya banyere ihe ị na-aṅụ ma ọ bụ iri. Ha ga-etinye obi ha dum stains na na agba ọzọ mfe nke nwere ike ime achagharị.
Laser enwu gbaa bụ otu n'ime ndị kasị dị irè usoro nke puru iluputa ngwa pụta. Nke a ga-abụ ụzọ kasị mma na-enwe ezé gị aghọ azụ ha mbụ na-acha ọcha dị ka ha nwere ike ịbụ. A bleaching ngwọta na-leghaara na gị ezé, mgbe ahụ a laser bụ tinye n'ọrụ iji rụọ ọrụ. The ezé bụ n'otu ntabi site dịkarịa ala ise ma ọ bụ isii shades.
Ọ dị mkpa na-agụnye ndu mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na ihe oriri gị, ka enyere na-ezé gị ike na ahụ ike. Abụba oriri na-amụba ohere nke cavities na nwere ike ime ka achagharị ezé gị. Zere ndị a iche iche ihe oriri n'ihi na ha bụ detrimental ka ahụ ike nke ezé gị. I kwesịkwara zere mgbe niile snacking mgbe aiming maka ahụ ike ọnụ ọchị.
NDỤMỌDỤ! Zere ezé-staining n'anya ma ọ bụrụ na ị na-achọ na-acha ọcha ezé. Ndị a na ụdị ọṅụṅụ na-agụnye Coke, kọfị na nwa tii.
Mkpa ka ị nnọọ anya mgbe eri ma ọ bụ na-aṅụ mgbe nwere a ezé whitened. Whitened ezé ga-adị mfe etinye obi ha dum iche iche na agba ma ọ bụ stains si nri na ihe ọṅụṅụ. Ịnọ n'ebe gbara ọchịchịrị ma ọ bụ staining oriri na ọṅụṅụ mgbe ị na nwere ezé gị e whitened. Kọfị bụ ihe atụ nke ihe ga-amịkọrọ n'ime ezé gị na-eme ka a na agba mgbanwe.
Gbalịa na-aṅụ site ahịhịa na-enyere gị ezé ga-anọgide na-acha ọcha na-egbuke egbuke. Iji a ahịhịa eme ka ọ hà na-aba n'anya na ị na-aṅụ ga n'iku ezé gị. The mmiri mmiri ga uzo ezé gị na-aga ala gị akpịrị.
NDỤMỌDỤ! A ọkachamara enwu gbaa nwere ike ịbụ oké ọnụ, ma ọ bụ eleghị anya ndị kasị mma ụzọ na-amalite whitening ezé gị. Mgbe usoro a bụ ihe dị oké ọnụ, ọ na-enye a mma na ngwa ngwa whitening ahụmahụ karịa ụzọ ndị ọzọ.
Ibe na whiten ezé dị mfe n'ebe nile na nwekwara pụtara ọnụ. Ndị a ibe na-arụ ọrụ site nhicha elu stains si ezé gị na ọgwụ ha na-emeso ya na whiten them.Whitening ibe nwere furu efu ewu ewu na-adịbeghị anya, n'ihi na ha adịghị enye ndị nsonaazụ kacha mma.
Ọ dị mkpa nke na mgbe ọ bụla ị na-ezé gị whitened, mgbe ọ bụla nri ị ga-asa ezé gị. Fọdụrụ afọdụ nri ahụ pụrụ iduga nje na ibu n'elu ezé gị. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ekwe ka ezé gị kwesie azụ n'elu, ndị bacteria nwere ike ime ka a ọtụtụ nsogbu, wee jide n'aka na ị abọ.
NDỤMỌDỤ! Mgbe ị nọ ná mkpa nke a na-acha ọcha ọnụ ọchị ozugbo, mkpa ka ị gara na gị dọkịta ezé ozugbo. Mgbe ọ bụla ị na-agbalị iji nweta a acha ọcha ọnụ ọchị, ị na-agba ọsọ n'ihe ize ndụ nke na-eme ka nsogbu kama eme a mma mgbanwe.
Ị na-elekọta ya ọ bụla uche na whitening agwọ ọrịa. Ọ pụrụ ịbụ nnọọ na-egbu mgbu na nwere ike ịbụ a obere oge ma ọ ka na-ewute. Ọ bụrụ na nke a emee, jide n'aka na ị ịhụ dọkịta eze tupu ị na-anọgide na ojiji nke whitening ngwaahịa. O wee mara banyere a dị iche iche nhọrọ na-agaghị emetụta gị a ka ezé gị.
Ise siga na ezé enwu gbaa na-adịghị arụ ọrụ ọnụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ mara mma-acha ọcha ezé, ị ga-mkpa ịkwụsị ise sịga. Mgbe ị na-eji ego na a whitening ọgwụgwọ na na-na-ese anwụrụ, ọ bụ a imefu ego. All na-arụ ọrụ ka whiten ezé gị ga-aba mgbe ị na-aṅụ sịga.
NDỤMỌDỤ! Tupu malite ezé enwu gbaa, ikwu okwu na gị dọkịta ezé. Ọ bụrụ na ị maara na ị ga-mkpa isi eze ọrụ mere na n'ọdịnihu dị nso, igbu gị oge ezé whitening n'usoro a ruo ọrụ e dechara.
Na-a otu eji atu stowed pụọ ruo mgbe unu na-eri swiiti ma ọ bụ ndị ọzọ na ihe na ato uto. Ndị a ihe oriri nwere ike arapara ezé gị mfe, na ike ịmalite na-ebibi ha. Mgbe i nwere na-atọ ụtọ, wepụta oge ma ọ bụ abụọ-asa ezé gị. Ntacha eze na-adịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị na juputara sikrob ezé gị na itucha ha nke ọma.
Ahịhịa na a ezé whitening ntacha eze. Ọ bụ ezie na ndị a toothpastes-adịghị dị ka nke nwere ike dị ka ndị ọzọ na whiteners, ha ga-ebupụ ihe na-adịbeghị anya stains ma na-echebe gị ezé si ọhụrụ stains. Ndị a toothpastes nwere a nwayọọ abrasive mere nke silica nke ga-n'emebighị Enamel.
NDỤMỌDỤ! Ọ dị mkpa ka abọ, chịngọm ịhịa aka n'ahụ, na floss ugboro abụọ n'ụbọchị ọ dịghị ihe ọzọ. Ezé gị ga-anọgide ukwuu acha ọcha ma ọ bụrụ na ị na-ajụ na floss oge ọ bụla ị ga-erikọ nri ma ọ bụ nri.
Itucha ọnụ gị mgbe ị na-aṅụ ma ọ bụ mmanya. Ezé gị ga-anọ acha ọcha ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla nwere oge ọcha ha mgbe ewe nri ma ọ bụ ọṅụṅụ. Nke a pụrụ inye aka gbochie stains na cavities.
Iji ezé whitening itienna pụrụ inyere gị aka whiten ezé gị. Otú ọ dị, na ọ dị mkpa ịkpachara anya banyere iji ha, n'ihi na ha na-arụ ọrụ dị ka bleach. Na nke kacha mma na-esi na usoro a, gị mkpa itinye ya n'ọrụ na-elekọta ma na-ezere overdoing ya.
NDỤMỌDỤ! Ụfọdụ whitening toothpastes na-adịghị niile ha na-ekwu na ha bụ. Ha pụrụ inye aka whiten ezé gị, ma na-kacha mma eji na njikọ na ndị ọzọ azum.
Ị chọrọ ịga dọkịta ezé na-esi gị ezé kpochara ọ dịghị ihe ọzọ ugboro abụọ kwa afọ. Jụọ onye ọrụ iji kpọtụrụ gị banyere otu izu tupu gị oge atọrọ dị nso.
Kọọrọ gị dọkịta ezé banyere healthiest ụzọ whiten ezé gị tupu ịzụrụ ihe ọ bụla. Gị dọkịta ezé nwere ike ịgwa gị ihe ga-akacha na ọnọdụ gị na aka gị banyere mmetụta.
NDỤMỌDỤ! -Ewu flossing gị regimin. Flossing na kwa ụbọchị na-enyere aka Bibie ọnụ gị nke ihe e dere ede, nke bụ otu n'ime ihe ndị mere ezé achagharị.
Na-aṅụ mmiri mgbe mgbe ga-enyere gị na acha ọcha ezé. Rinsing na mmiri bụ ezigbo ụzọ iji gbochie stains si appearing.Make ọ bụrụ àgwà anyị ṅụọ mmiri gị nri na n'oge nri.
Wine na soda bụ onye iro gị na-achọ na-acha ọcha ezé. Ndị a ọṅụṅụ nwere ike n'iku ma ọ bụ discolor ezé gị. Dochie ha mma ọṅụṅụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịṅụ a-aba n'anya na agbanyeghị, jide n'aka na ị asa ezé gị ozugbo o kwere omume n'ibelata na staining mmetụta.
NDỤMỌDỤ! N'ụgbụgbọ na ukpa osisi nwere ike iji na-eji nwayọọ sikrob ndị ahụ na-stains on ezé gị. Na iji n'ụgbụgbọ na a mgbe niile nwere ike wepu ndị a stains na-acha odo odo achagharị ọtụtụ ndị na-hụrụ si ụtaba eji ma ọ bụ ịṅụ ụfọdụ ọṅụṅụ.
Mkpụrụ osisi na veggies na a fibrous anọgidesi ike ga-eji na-ndammana sikrob ezé gị. Ihe oriri ụfọdụ nke ga-bụ brọkọlị, kukumba, carrots, na carrots. -Agbalị swish nri bụ nke dị n'ọnụ gị iji nweta ozi ndị ebe kpuchie.
Igba ọzọ Mmiri ara ehi ihe n'ime ihe oriri gị. Strong, ike ezé nwere ike ekewet ndị nri na oriri dị ka bred, ara-ehi na cheese. Ndị a mineral na-melite Enamel na ezé gị, nke na-eme ezé gị na-erughị susceptible ka ihe oriri na ihe ndị ọzọ na-emekarị-eme ka achagharị. Nke a pụtara na gụnyere ihe oriri ndị dị otú a na ihe oriri gị ga-enyere gị nwere a ọnụ ọchị na dị acha ọcha.
NDỤMỌDỤ! Home ịgba akwụkwọ maka inweta acha ọcha ezé agbasaghị nwere a ala n'akụkụ–ha pụrụ mgbe ụfọdụ iduga mmetụta ọsọ ọsọ, aza goms na bụ isiokwu ọbara ọgbụgba. Egbula kpọtụrụ gị dọkịta ezé ma ọ bụrụ na ị na-enwe ọ bụla n'ime ndị a eze okwu.
Bacteria ga-eto gburugburu ọnụ gị mgbe ị na-eri. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ekwe ka ezé gị kwesie azụ n'elu, ndị bacteria nwere ike ime ka a ọtụtụ nsogbu, otú icheta ahịhịa ha.
Zere ọchịchịrị n'anya nakwa mkpụrụ osisi iji na-enwe na-acha ọcha ezé. ụfọdụ ọṅụṅụ, dị ka red wine na kọfị, nwere ike ịhapụ stains on ezé gị. Ọ bụrụ na ị nanị nwere ike mbà ndị a ọṅụṅụ, ịṅụ site a ahịhịa aka uzo na staining mmetụta.
NDỤMỌDỤ! Iji whiten ezé gị ị pụrụ nanị abọ ha na peroxide tapawa na mmiri soda. Ma ndị a na ihe ndị sie ya na ọtụtụ azụmahịa whitening toothpastes, ma ha nwere ike dị na gị pantiri n'ụlọ.
Ndị bekee nwere ike ime ka miri stains na ezé gị. Ọ bụrụ na ị ga-aṅụ kọfị ma ọ bụ tii, i nwere ike iji a ahịhịa ka ọ ṅụọ ha, asa ezé gị gụchara gị cup, ma ọ bụ ahịhịa ezé ozugbo gị ihe ọṅụṅụ na-okokụre. Na-aṅụ tii na kọfị, tinyere ise siga, bụ isi nkwado na discoloring ndị mmadụ ezé.
Jiri a eke usọbọ whiten ezé gị, dị ka apple cider mmanya. Nke a na e gosiri iji wepụ stains na iwepụ bacteria na ndị ọnụ. Aka ịdị irè na-eji ọgwụ, ikwacha akpiri kwa na mmanya, -ututu ka mma, mgbe ahụ na-eso ya gbagoo n'ebe a ezé brushing.
NDỤMỌDỤ! -Ahọrọ nri atu. Ekwu okwu na gị dọkịta ezé ga-esi ya ndụmọdụ banyere ihe atụ ahụ ị kwesịrị ị na họrọ.
E nwere eke ezé whiteners na ị ga-enwe ike ịhụ n'èzí kama ịzụ ha azụ, otú a na-azọpụta gị ego. N'ụgbụgbọ na ukpa osisi bụ ihe magburu onwe ọgwụgwọ na-whiten ezé. Esi n'ụgbụgbọ nke otu osisi si, itucha na ọ juputara na-ete gị ezé na ya. Nke a na-arụ ọrụ iji wepụ stains na ihe e dere ede.
Unu mara na ọ bụla enwu gbaa ngwọta naanị whiten eke ezé. Ọ bụrụ na ị nwere veneers, dị ka okpueze, fillings, veneers ma ọ bụ ndị ọzọ na ụdị nke eze na-arụ ọrụ na n'ihu n'ihu ezé, ha ga-anọgide na-agba. Whitening eke ezé nwere ike ime ka eze na-arụ ọrụ a rụworo riputasi budata.
Ịkpọ gị orthodontist ma ọ bụ dọkịta ezé tupu ị na-ahọrọ na-whiten ezé gị. Adịghị amalite whitening ezé gị ma ọ bụrụ na i nwere ime ihe ọ bụla ọzọ okwu.
A na-ese siga na-adị mfe mmadụ ịnọ na n'ihi na ndị na-acha odo odo stains na ezé. O nwere ike ịbụ kama siri ike na-acha ọcha ọnụ ọchị ma ọ bụrụ na ị na-aṅụ sịga. Ọ bụrụ na ị na-aṅụ sịga, ị kwesịrị ị na wedata gị ike na ọdịdị gị ezé.
Jiri ihe oroma bee n'ime akụkụ-ete stains na-eme ka ezé gị acha ọcha. I nwekwara mix mịrị amị oroma peels na ala n'ọnụ mmiri doo ka aromatic toothpaste.Make n'aka na itucha ọnụ gị mgbe ị gụsịa brushing-ewepụ ihe niile mmezi mkpụrụ sugar.
Zere acha mouthwashes ka ha na-ebu kwukwara colors.Mouthwashes nwere dyes ịgbakwunye agba nwere ike ime ka a na-achọghị achagharị na-egosi na gị ezé.
-Asa ezé bụ a ezi na-echebe ezu. Ị nwere ike mgbe niile-esi ntacha eze kpọmkwem mere ka whiten ezé gị. E nwere ọtụtụ iche iche iche iche, otú na-eme nnyocha ha pụrụ inyere gị aka ịhụ nke na-arụ ọrụ maka ezé gị.
Gbalịa rụọ gị ume ka a acha ọcha ọnụ ọchị. Nwaa gị ume site licking a dị ọcha nke aka gị. Ọ bụrụ na i nwere ike na-esi isi ọnụ mmiri ahụ gwọọ, -eji a Mint ma ọ bụ ụfọdụ mouthwash. Ọ bụrụ na ị na-aga na mouthwash, hụ na ọ bụ mmanya-free iji zere ihicha ọnụ gị.
Whitening ezé Edemede nnọọ ntụle. E nwere olileanya na mgbe na-agụ isiokwu a na ị ga-esikwu gị ike na mmejuputa atumatu ụfọdụ n'ime echiche adade maka whitening ezé. Eji ozi a iji n'enweghị mma gị na nha nha agba.
Ihe site whiten Ezé Guide -
Categories: Home Dabere na whiten Ezé Tags: banye stains, Dịtụrụ Ezé Gị, Dental cleanings, Laser whitening ezé, ezé-elekọta, -acha ọcha ezé, -acha ọcha ezé Atụmatụ, whiten ezé gị, acha ọcha ọnụ ọchị
Eme ka Ezé Gị dazzle ndị a Atụmatụ